Umndeni ukhala ngesigwebo ‘esincane’ | News24
Umndeni ukhala ngesigwebo ‘esincane’
ISITHOMBE:SITHUNYELWE UNksz Nompilo Ndlovu owabulawa ngesihluku sokunqunywa nokushiswa eMbali ngo-2013.
UMNDENI wakwa Ndlovu eMbali e-Unit 2 uthi awuneme ngesigwebo seminyaka engu-15, esinikwe loyo owabulala indodakazi yawo uNksz Nompilo Ndlovu owabulawa ngesihluku sokunqunywa nokushiswa ngo-2013.
Ngokusho kukanina kamufi uNksz Gida Ndlovu, uMnu Thami Ntenza ugwetshe iminyaka engu-15 nje vo enkantolo kaMantshi ngeledlule, emihlanu yayo azoyidonsela ngaphandle.
UNdlovu uqhube ngokuthi umndeni a wuneme ngalesi sigwebo njengoba kuphinde kwathiwa uzoqala ukutoka ngaphakathi ngomhlaka 13 kuMfumfu (October).
Uthe indlela abulawa ngesihluku ngayo umufi njengoba anqunywa, washishwa waphinde wagqitshwa emva kwendlu ayiyifanele le minyaka etholwe umsolwa njengoba eminye yayo ezoyidonsa ngaphandle.
Uthi kwakona ukuqulwa kwaleli cala akuzange kuwugculise umndeni njengoba yize ummangalelwa azivumela yena ukuthi walenza leli cala, isikhathi esiningi ubengaphandle njengoba ebelokhu ethola ibheyili enemibandela. UNdlovu uthe selokhu langena enkantolo ngonyaka odlule ummangalelwa uze waqala ukuzikhulumela enkantolo kulo nyaka njengoba icala belilokhu lihlehliswa.
Uqhube kanje: “Kuningi okwenzekile selokhu leli cala lingene enkantolo njengoba ummangalelwa eke waphula imibandela yebheyili ngoNdasa (March) walo nyaka.
“Uzame ukushayisa umalume wakhe ngemoto njengoba ebengomunye wofakazi baleli cala. Phezu kwalokho liquliwe icala, wanikwa enye ibheyili enemibandela.
Uthe basayinile ngoba kuthiwe icala lingase liqale phansi.
“Thina njengomndeni besifisa ukuthi athole iminyaka esukela ku-20 kuya ngaphezulu edonsa ngaphakathi ngenxa yobulwane abulala ngabo indodakazi yethu,”
Okhulumela iNational Prosecuting Authority KwaZulu-Natal uNksz Natasha Ramkisson uthe: “Uma umndeni ungagculisekile ngalesi sinqumo, ungaxoxisana nemantshi. Njengabashushisi siyawaqula amacala kodwa isigwebo sikhishwa iJaji noma iMantshi.
Kuyenzeka ukuthi amacala aqalwe phansi kabusha kodwa izimo ziyahlukana.”